Foxconn any India | Avy amin'ny mac aho
Jordi Gimenez | | Apple products, tsaho
Toa mikasa ny hanitatra ireo ozininy any Fox i Foxconn ary mety hitranga izany noho ny fangatahana avo lenta avy amin'ny Apple sy ireo orinasa hafa amboarin'ilay orinasa sinoa. Mazava fa manana andraikitra lehibe amin'ny Foxconn sy ireo vokatra vokariny i Apple, saingy tsy maintsy mazava fa ilay goavambe sinoa manangona vokatra ho an'ny orinasa maro.
Ny olan'ny fizarana ny vokatra Apple vaovao dia matetika mifandraika amin'ny olan'ny fivorian'ny fiangonana, marina fa misy fiantraikany ny tranga maro, fa ny ankamaroan'ny olana dia tonga ateraky ny fangatahana avo sy ny tsy fahampian'ny tahiry. Amin'ity hetsiky ny Foxconn ity, Apple sy ireo orinasa hafa dia hahazo tombony mivantana.
Mamela ny ampahany amin'ny fanambaran'ny praiminisitra India izahay, Devendra Fadnavis:
India no manana finday betsaka indrindra eto an-tany, fa ny 7% amin'ireo finday ireo ihany no amboarina eto amin'ny firenena. Ny ambiny dia ampidirina. Mihazakazaka haingana ny tanànantsika. Ny fanjakana tanàn-dehibe indrindra any India, Maharashtra dia be ny anjara birikiny ary noho izany dia raisiko ny fahaizana sy fampiasam-bola sinoa amin'ity sehatra ity.
Amin'izany rehetra izany, ity vaovao ity dia mety ho lasa orinasa Foxconn vaovao telo miavaka amin'ny firenena, mpivady natokana saika manokana ho an'ny fivorian'ny vokatra ary ny iray fahatelo ho an'ny R&D.
Toa izany Apple dia manana fifandraisana ratsy amin'ny governemanta India ary mivantana izy ireo dia tsy afaka naka ny iray amin'ireo ozinin'izy ireo tao, fa raha Foxconn no manao azy dia tsy mitovy, ka izy ireo no hifampiraharaha amin'ireo manampahefana mahefa. India dia manana orinasa maro ao amin'ny fireneny, ratsy indrindra tsy misy natokana ho an'i Apple. Raha mandeha izao fifampiraharahana izao dia mety hisy vokatra tonga miaraka amin'ny orinasa: Natao tany California, tafavory ao India.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » tsaho » Foxconn dia mikasa ny hanokatra orinasa telo any India
Apple dia afaka mampihatra angona fifamoivoizana amin'ny fotoana maharitra ao amin'ny Maps